June 2019 – Kalfadhi
Gudoomiye Dhoobo-daareed oo arrin Dastuurka Puntland ka hor imanaysa ku tilmaamay dabaal-degga Yoga
June 30, 2019 Cabdiraxmaan Maxamed
Gudoomiyaha golaha wakiillada Puntland Cabdixakiin Maxamed Axmed Dhoobo-daareed ayaa si adag uga soo horjeestay dabaal-degga xuska Yoga oo Garowe lagu qabtay. Waxay ahayd munaasabad balaaran oo madaxweynaha Puntland iyo safiirka dalka India ay ka qayb-galeen. Haween tiro badan oo ay masuuliyiin ku jiraan ayaa baraha bulshada lagu fidiyay iyagoo meel garoon ah kaga qaybgalaya munaasabadda isla markaasna jimicsiyo kala duwan samaynaya, laakiin dumarkaas si wanaagsan oo asturnaan leh ayay u lebisnaayeen. Arrinta xuska Yoga ayaa maanta baraha bulshada dood weyn ka dhalisay. Gudoomiye Dhoobo-daareed oo arrinta si adag uga hadlay…
Gudoomiye ku xigeenka Baarlamanka Puntland oo dhaliilay dabaal-degga Yoga oo lagu qabtay Garowe
June 30, 2019 June 30, 2019 Cabdiraxmaan Maxamed
Gudoomiye ku xigeenka golaha wakiillada Puntland Avv. Cabdicasiis Abdullahi Cismaan ayaa si kulul u dhaliilay xuska dabaal-degga Yoga oo maanta lagu qabtay Garowe. Waxaa baraha bulshada qabsaday sawirro haween tiro badan oo ay ku jiraan masuuliyiin dowladda ka tirsan kuwaas oo meel dadweynuhu daawanayo ku jimicsanaya. Haweenkani si wanaagsan ayay u lebisnaayeen, laakiin waxaa dadku aad u dhalillay in ay ku jimicsadaan meel dadweynuhu daawanayo isla markaasna sawirro laga qaadayo. Gudoomiye Cabdicasiis ayaa yiri “Diinteenu waxay qabtaa qolo qofkii isku shabaha inuu ka mid yahay, hadii Ciyaarta Yoga ay tahay…
Gudoomiye Mursal iyo Amb. James Swan oo Muqdisho ku kulmay
Gudoomiyaha golaha shacabka Baarlamanka federaalka ah ee Soomaaliya mudane Maxamed Mursal Sheikh Cabdiraxmaan ayaa maanta xafiiskiisa ku qaabilay wakiilka gaarka ah ee xoghayaha guud ee QM u qaabilsan arrimaha Soomaaliya Amb. James Swan. Labada masuul ayaa ka wada-hadlay arrimaha doorashooyinka qaranka iyo dardargelinta shuruucda muhiimka u ah doorashooyinka dalka. Wuxuu ahaa kulan u badan is xogwaraysi guud iyo isbarasho. Golaha shacabka iyo xafiiska QM ee Soomaaliya ayaa yeelanaya wada-shaqayn wacan, sida ay labada masuul isla lafa-gureen. Wuxuuna safiirku balanqaaday in hawlihii socday uu halkoodii ka sii wadi doono. Guddoomiyaha Golaha…
Madaxweyne Xaaf oo sheegay in Galmudug aysan heysan Xorriyad dhameestiran, xilli loo dabaal dagayo maalinta Xorriyadda Soomaaliya
June 26, 2019 Kalfadhi
Madaxweynaha Dowlad Gobaleedka Soomaaliyeed ee Galmudug Axmed Ducaale Geelle “Xaaf” ayaa sheegay in Soomaaliya maanta ay u dabaal dageyso maalinta Xorriyadda Gobalada Waqooyi, sidoo kalane ku beegan maalintii ugu horreysay oo calan Soomaaliyeed laga taago dalka basle waxa uu sheegay in Soomaaliya ay maanta heysato Xorriyada qarsoon. Xaaf oo ka hadlayay munaasabad lagu qabtay magaalada Cadaado ee Gobalka Galgaduud ayaa sheegay in dhib badan laga soo maray Xorriyadda Soomaali balse maanta dalka ay ku jiro xaalad adag oo dhan kasta ah. “Aniga waan joogay maalintii calanka laga taagay Hargeysa waxay…
Baarlamaanka Senator Warar
Abshir Bukhaari “ 26ka Juun waxay bidhaan u aheyd gobanimadeynii iyo Israaca labada gobal”
Guddoomiye ku xigeenka 1aad ee Golaha Aqalka Sare ee Baarlamaanka Soomaaliya Senator Abshir Bukhaari ayaa xalay ka qaybgalay munaasabad loogu dabaal dagayo maalinta Xorriyadda Gobalada Waqooyi ee Soomaaliya. Munaasaadda ayaa ka dhacday magaalada Cadaado ee Gobalka Galgaduud waxaana sidoo kale goob joog ahaa Xildhibaano katirsan Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya, sida Xildhibaan Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen “Odawaa” Xildhibaan Saabir iyo mas’uuliyiin kale. Khubad uu jeediyay Senator Abshir Bukhaar ayaa waxa uu kaga hadlay muhiimadda ay maanta oo kale u leedahay dhamaan Shacabka Soomaaliyeed. Sidoo kale waxa uu soo jeediyay talo ku…
Madaxda Dowladda oo ka qeybgalay Munaasabad loogu dabaal dagayo 26-ka Juun oo Muqdisho lagu qabtay
Maxamed Cabdullaahi Farmaajo Madaxweynaha Soomaaliya, Guddoomiyaha Aqalka Sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi iyo masuuliyiin kale ayaa ka qayb galay xuska sannad-guurada 59-aad ee ka soo wareegtay maalintii ay Xorriyadda qaateen Gobollada Waqooyi ee dalka waxaana munaasabadaasi lagu qabtay xarunta Dowladda Hoose ee Gobalka Banaadir. Guddoomiyaha Aqalka Sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi oo marka hore hadlay ayaa ugu hambalyeeyay dhamaan umadda Soomaaliyeed, gaar ahaan Gobalada Waqooyi maalinta Xorriyadda Soomaaliya, waxa uuna Soomaali u rajeeyay in ay israacdo. “Hambalyo ayaa leeyahay dhamaan Shacabka Soomaaliyeed, 26ka Juun waa maalin nagu weyn waana markii ugu horreysay…
Xildhibaan Odawaa oo soo bandhigay 3 qodob oo xal u noqon kara muranka Galmudug
June 25, 2019 Kalfadhi
Xildhibaan Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen Odawaa oo katirsan Xildhibaanada Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya islamarkaana degaan doorashadiisa ay tahay Galmudug ayaa soo bandhigay qodob muhiim ah oo xal looga gaari karo dhibaatooyinka heesta Galmudug sida uu ku sheegay hadal uu jeediyay. Xildhibaan Odawaa ayaa ka dalbaday Dowladda Federaalka Soomaaliya in ay faragelinta ka joojiso Maamulkaasi oo labadii sano ee la soo dhaafay ka bixi waayay khilaaf hareeyay Shaqooyinkii Maamulkana meesha ka saaray. “Meel adag ayuu marayaa xaalka Galmudug waxeyna u baahantahay in laga joojiyo dhibaatada hadii aysan wax u galin dadka…
Sheekh Shaakir “Wixii maanta ka dambeeyo go’aanka dowladda dhexe ayaa ka shaqeyn doono Galmudug”
Madax Xukuumadda Galmudug Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan ayaa sheegay in degaanada Galmudug wixii hadda ka dambeeyo uu ka shaqeyn doono amarka Dowladda Federaalka Soomaaliya islamarkaana uu dhamaaday khilaafkii u dhaxeeyay Galmudug iyo Dowladda. “Aniga oo ku hadlaya magaca Galmudug waxaana cadeynayaa in ay bilaabatay wadashaqeynta dowladda federaalka iyo Galmudug, hadda wixii ka dambeeyana halkaan waxaa ka shaqeyn doona amarka dowladda dhexe” ayuu yiri Sheekh Shaakir Macalim Xasan. “Waxaa jira qodobo iyo waxyaabo aan isla meel dhignay oo aan ku heshiinay Annaga iyo Dowladda Dhexe waxaana rajeyneynaa in loo fulin…
Madaxweyne Xaaf iyo Xildhibaano katirsan Baarlamaanka Soomaaliya oo shir ku yeeshay Cadaado
Madaxweynaha Maamulka Galmudug Axmed Ducaale Geelle “Xaaf”, ayaa xalay kulan Saacado badan socday waxa uu la qaatay Xildhibaano katirsan labada Gole ee Baarlamaanka Soomaaliya, kuwaas oo shalay gaaray magaalada Cadaado ee gobalka Galgaduud. Wafdiga Xildhibaanada ah ee kulamada la qaatay Madaxweynaha Galmudug Xaaf, ayaa waxaa hogaaminayay Guddoomiye ku xigeenka 1aad ee Golaha Aqalka Sare ee Baarlamaanka Soomaaliya Senator Abshir Bukhaari, waxaana kamid ah Wasiirkii hore ee Arimaha Gudaha Xildhibaan Cabdiraxmaan Odawaa iyo Xildhibaan Saabir. Madaxweyne Xaaf iyo Wafdiga Xildhibaanada ah ayaa kawada hadlay xaaladda jahwareersan ee Galmudug iyo muranka xooggan…
Baarlamaanka Falanqeyn Warar
Baarlamanka Puntland oo cafiyay eedaymo xeer-jebin iyo musuq-maasuq oo ay u haysteen wasiirka amniga
June 24, 2019 June 24, 2019 Cabdiraxmaan Maxamed
Golaha wakiillada Puntland ayaa cafis u fidiyay wasiirka amniga iyo hubka dhigista mudane Cabdisamad Maxamed Gallan oo ay toddobaadkii hore guddiga amniga iyo nabadgelyada ee goluhu ay u jeediyeen eedaymo dhawr ah. Eedaymaha wasiirka loo haystay ayaa isugu jiray sharci-jebin iyo musuq-maasuq. Guddiga amniga iyo nabadgelyada oo warbixin arrimahaas faahfaahinaysa golaha keenay waxay kaloo ku eedeeyeen in wasiirku diiday inuu dhawro la shaqaynta guddiga oo la xisaabtan iyo korjoogtayn ku leh hay’ado amni oo ay wasaaraddu ka mid tahay. Wasiirka amniga mudane Cabdisamad Gallan ayaa maanta golaha hortegay wuxuuna ka…
Warbixinnadii u Dambeeyay
Baarlamaanka Puntand oo galay fasax ilaa bisha August
Guddiga doorashooyinka heer faderaal oo kormeeray hoolka doorashada Aqalka Sare ee Kismaayo
Akhriso: Hormarka laga sameeyay doorashadda tan iyo markii maamulkeeda lagu wareejiyay Ra’iisul Wasaare Rooble
Axmed Madoobe oo warbixin ka dhegeystay guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federal
Dib-u-dhac ayaa ku yimid doorashadda xildhibaannada Aqalka Sare
Sharciyo La Ansixiyay
© All Right Reserved Kalfadhi 2017